2019 ဖြင့် ဇာတ်ကား100 ကား
ပြိုင်ကားပွဲစဉ်နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ နာမည်ကြီး ပြိုင်ကားသမား ဆမ်မွန်ရိုးရဲ့သား ကမ်မွန်ရိုးဟာ ခက်ခဲလှတဲ့ဘဝမှာ ရုန်းကန်ရင်းနဲ့ သူ့အဖေအတွက် ပြိုင်ကားပွဲစဉ်တွေမှာ ဝင်ပြိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကားကိုပစ္စည်းအကောင်းစားတွေမဆင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်မရတဲ့အခါ သူ့ဘဝကို အလိုမကျဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူ့အဖေရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ ဘော့ဘ်လက်စကီရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံပြီး သူ့အတွက် ဝင်ပြိုင်လိုက်ပါတော့တယ်။ သားအဖ၂ယောက်ကြား ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ကာ ဆမ်မွန်ရိုးကိုယ်တိုင် ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပါလာတဲ့အချိန်မှာတော့ ပွဲစဉ်က အရမ်းကိုကြမ်းတမ်းလာခဲ့ပါတော့တယ်။
Action ကားပရိသတ်တွေအတွက် သဘောတွေ့စေမဲ့ ကိုရီးယားအက်ရှင်ကားသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရီးယားအက်ရှင်ကားတော်တော်များများဟာ အတော်လေးကြည့်ကောင်းတာများပါတယ်။ ရိုက်ကူးပုံတွေကောင်းမွန်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အတွက် ကိုရီးယားအက်ရှင်ကးတွေကိုလူကြည့်များလာကြပါတယ်။ ဒီကားလေးကလည်း အက်ရှင်သီးသန့်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး အသတ်အပုတ် အတိုက်အခိုက် အကွဲအပြဲ သွေးအလိမ်းလိမ်းနဲ့တွေ့မြင်ရမဲ့ဇာတ်ကားပါ။ ဇာတ်ဝင်ခန်းအများစုက သတ်ပုတ်နေတာဖြစ်တာကြောင့် ကြည့်ရတာပျင်းမသွားစေပါဘူး။ အက်ရှင်သီးသန့်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဇာတ်လမ်းကိုသိပ်မညွှန်းတော့ပါဘူး။ အက်ရှင်ပရိသတ်တွေအတွက် တကယ်မပျင်းရစေမဲ့ရိုက်ချက်တွေ အသတ်အပုတ်တွေကိုသေချာတင်ဆက်ထားပြီး နောင်တရစေမဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တဲ့အတွက် ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
အွန်ဟီး လေးဟာ ကျပ်သိပ်မပြည့်တဲ့ ကလေး ဖြစ်ပြီးကျောင်းမှာရော လူမှု ပတ်ဝန်းကျင်မှာပါ အနှိမ်ခံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ အွန်ဟီးမှာ သူ့ကို အရမ်း ချစ်တဲ့ အစ်မ အင်ဟေး ရှိပါတယ်တစ်ရက်မှာတော့ လူတစ်ယောက်က အွန်ဟီး ကို တစ်နေရာညာခေါ်ပြီး အနိုင်ကျင့်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရာ အင်ဟေး က လိုက်ရှာပြီး ကိုယ်ထိလက်ရောက်မှု ကျူးလွန်ခဲ့လို့ ကျူးလွန်သူက ထောင် ၆ လသာ ကျပြီးအင်ဟေး ကတော့ ထောင် ၂ နှစ်လောက် ကျသွားခဲ့တယ်…ဒီလိုနဲ့ ထောင်က ပြန်လွတ်လာတဲ့ အင်ဟေး ဟာ ညီမဖြစ်သူကိုစောင့်ရှောက်ပြီးပဲ နေတော့မယ် လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်…အင်ဟေး ဟာ တိုက်ကွန်ဒို ချံပီယံ ဖြစ်ပြီး သက်တော်စောင့် အလုပ်လုပ်ခဲ့သူ တိုက်ခိုက်ရေး သမား တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်…ထောင်က လွတ်လာပြီး နောက်နေ့မှာပဲ ပြသနာက စဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသွားတဲ့ အွန်ဟီး တစ်ယောက် ပြန်မလာတော့တဲ့ အတွက်အင်ဟေး လိုက်ရှာရပါတော့တယ်…အွန်ဟီး ကို လူပွဲစား တစ်ယောက်က ဖမ်းသွားတာဖြစ်ပြီးအကောင်ကြီးကြီး အမှီးရှည်ရှည် လူကြီးအသိုင်းအဝိုင်း တစ်ခုသို့လက်ပြောင်း ပြန်ရောင်းခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်…ဒီတော့ကာ ညီမဖြစ်သူ အွန်ဟီး သူ့မုန့်ဖိုးလေးနဲ့ စုပြီးလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ အနီရောင် ဝမ်းဆက်လေးကိုဝတ်ပြီး ညီမရှာပုံတော် ဖွင့်ရင်း အယောက် ၁၀၀ နဲ့ ၁ ယောက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရမယ့် အင်ဟေး ဟာ ဂျွန်ဝစ် နဲ့ ညီမ တော်သလားပြောရအောင် လျင်မြန်ဖြတ်လတ်လွန်းတဲ့ တိုက်ကွက်တွေကိုအားရပါးရ ကြည့်ရှုရမှာပါ…အဒ်မင်တောင် မှ သူ သတ်ရင် သေလို့ရအောင်လှပတဲ့ မျက်နှာပေးလေး က ချစ်ဖို့ကောင်းနေပါတယ် 😀
Master Z Ip Man Legacy ( 2019 )
IP Man3ပြီးတဲ့အနောက်က Timeline ကိုဆက်လက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်း ဝင်ချွန်းသိုင်းပညာကိုဦးတည်ပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်သလို သိုင်းကွက်..ချကွက်..ကြမ်းချက်တွေကတော့အရင် IP Man ဇာတ်ကားတွေလို ခပ်ကြမ်းကြမ်းပါပဲ.. ဒီကားရဲ့ IMDb Rate ကတော့ 7.2 ဖြစ်ပါတယ် ဝင်ချွန်း သိုင်းပညာရှင် ကျန်းကျစ်ယိဟာ ယိမန်နဲ့ယှဉ်ပြိုင်လို့ရံှုးနိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာ သိုင်းလောကကနေ တိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာလာခဲ့တယ်သာမာန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့သူ့ဘဝထဲမှာသူများကိုကူညီရင်းနဲ့ပဲ မှောင်ခိုဂိုဏ်းတခုနဲ့ငြိမိပြီးဘယ်လိုအရှုပ်တွေဝင်လာမှာလဲ..ဘာတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲဝင်ချွန်းသိုင်းကွက်ကိုမသုံးတော့ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ကဘယ်လိုမျိုးများဖြေရှင်းနိုင်မှာလဲဆိုတာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီနေ့ခေတ်လူသားတွေရဲ့ အသက်ရှင်နေထိုင်ပုံ စားသောက်ပုံနဲ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးကိုများစွာ ထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတယ်ဒီဇာတ်ကားက လူသားအများစုဟာ ပျက်စီးနေပြီဖြစ်ပြီးအဆိပ်သင့်နေတဲ့လေထုကြောင့် လူသားတွေ နေထိုင်လို့မရတော့ဘူးယာယီ လွန်းပျံယာဉ်တွေအသုံးပြုပြီး အာကာသထဲထွက်ကာလူနေလို့ရမဲ့ ဂြိုလ်ကို စူးစမ်းရှာဖွေနေကြပါတယ် ဒါပေမဲ့လည်း ဆမ်ဝယ်လ်ဒန် တစ်ယောက်ကတော့ သူ့အဖေရဲ့ထင်မြင်ချက် မှန်ကန်တယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြဖို့ကမ္ဘာမြေမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး သုတေသနဆက်လုပ်ကာပြောင်းလဲသွားတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးမှာ လူသားတွေပြန်လည်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေရှာဖွေနေတဲ့အကြောင်းရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်
<p>Channel Myanmar ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဒီတစ်ခေါက် ကားကောင်းလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးနာမည်ကတော့ The Boy Who Harnessed The Wind(2019)ပါ။Rating တွေအနေနဲ့လဲ မြင့်မားပြီး အပြင်မှာ တကယ်ရှိတဲ့ ဝီလီယမ် ကန်ကွမ်ဘာဆိုတဲ့ ကောင်လေးအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီကားလေးဟာ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့ ဇာတ်လမ်းအဆုံးထိကိုဆွဲခေါ်သွားနိုင်မှာပါ။ကြည်နူးပီတိဖြစ်ရင်း အလိုမကျဒေါသထွက်ရင်း စိတ်ခွန်အားတွေ
ပါပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ဒီကားလေးက Imdb Rating 7.6/10 Rotten Tomatoes 86%ရရှိထားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်လေးကိုလဲ တင်ပြလိုပါသေးတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေဟာ ပုံပြင်တွေထက် ဆန်းကျယ်တယ်ဆိုတာ တကယ်ပါပဲ။ထို့အတူပါပဲ။ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာ တက်မရှိလက်နဲ့လှော်မယ်ဆိုတဲ့ထုံး နှလုံးမူထားတဲ့၁၃နှစ်အရွယ်ကောင်လေး ဝီလီယမ် ကန်ကွမ်ဘာ ဟာ Wimbeဆိုတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာမှာနေတဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်ပါ။မိဘ
တွေရဲ့မပြည့်စုံမှုကြောင့် ကျောင်းလခအကျေမပေးသွင်းလို့ကျောင်းတစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ကျောင်းထွက်ခဲ့ရပါတယ်။တစ်နေ့သူတို့ရွာမှာ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ကာ အငတ်ဘေးဆိုက်ကိန်းကြုံပါတော့တယ်။မဲရရှိရေးသာစိတ်ဝင်စားတဲ့အစိုးရကလဲ မသိချင်ယောင်ဆောင်မျက်နှာလွှဲနေခဲ့ပါတယ်။ဝီလီယမ် တစ်ယောက်ကတော့ သူ့ဆရာရဲ့စက်ဘီးက မီးသီးခွက်လေးကိုကြည့်ကာ အကြံရသွားပါတော့တယ်။ရသွားတဲ့အကြံပေါ်မူတည်ရင်း ကျောင်းစာကြည့်တိုက်ထဲကိုခိုးဝင်ကာ စာတွေဖတ်ပြီး ရွာ
လေးကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။၁၃နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်က ဘယ်လိုများလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲ?သူဘယ်လိုစွန့်စားကာ ကြိုးစားခဲ့သလဲ?သူဖြစ်ချင်ခဲ့သလိုတွေရော ဖြစ်လာပါ့မလား?စတဲ့မေးခွန်းပေါင်းများစွာကို အာဖရိကရဲ့အလှအပတွေခံစားရင်း စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ ရယူကာ ကြည့်ရှူရမယ့်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်&hellip;</p>
<p>ဒီကာတွန်းကားလေးကတော့ အံ့သြဖွယ်ရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဝမ်းဒါးလန်းဆိုတဲ့ ပန်းခြံလေးအကြောင်း တင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဂျွန်ဘယ်လီဆိုတဲ့ကလေးမလေးက စိတ်ကူးပုံဖော်တဲ့နေရာမှာ အရမ်းကို ဉာဏ်ကောင်းပြီး အိုင်ဒီယာအသစ်အဆန်းတွေထွက်တတ်ပါတယ် သူ့အမေရယ် သူ့မျောက်ကလေး ပီးနပ်ရယ်နဲ့ ကစားကွင်းကြီးဖန်တီးတိုင်း တူတူဆော့နေကြပါပဲ</p>
<p>ကစားကွင်းပုံစံငယ်လေးတောင် အိမ်မှာဆောက်ထားတဲ့အထိ ခိုင်ခိုင်မာမာစွဲနစ်ဆော့ခဲ့တာပါ ဒါပေမယ့်တစ်နေ့မှာတော့ သူ့မိခင်နေမကောင်းတဲ့အတွက် အဝေးမှာ ဆေးကုသမှုခံယူရပါတော့တယ် အဲဒီအခါမှာပဲ သူ့အမေကိုဆုံးရှုံးရမှာကြောက်စိတ်နဲ့ ပန်းခြံကိုလည်းဂရုမစိုက်နိုင် မဆော့နိုင်ဘဲ ပစ်ထားလိုက်မိပါတော့တယ် စိတ်ကူးထဲကကစားကွင်းလေးဆိုပေမယ့် အမှတ်မထင် အဲဒီကစားကွင်းက အပြင်မှာရှိနေခဲ့မှန်း..
သူ့အရုပ်လေးတွေ အသက်ရှိနေခဲ့မှန်းကို သူသိသွားခဲ့ရပြီး ကစားကွင်းကြီးပျက်စီးတော့မယ့်ကိန်း သူ့အရုပ်လေးတွေ သေရတော့မယ့်ကိန်း ဆိုက်နေတာကိုလည်း သူမြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့မယ် ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းမသိဘဲ ဒီကစားကွင်းကြီးတစ်ခုလုံးကို သူ့အနေနဲ့ ပြန်လည်ကယ်တင်ရပုံကို
ရိုက်ကူးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ကာတွန်းကားဆိုပေမယ့် အချိတ်အဆက်မိမိနဲ့ သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်တွေ ယုံကြည်မှုတွေ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုပါ ထည့်ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်</p>
<p>The Kid(2019)IMDb&hellip;.6.2မိဘဆိုတာ တုနှိုင်းမဲ့တဲ့မေတ္တာတရားရှိကြလို့ အနွေးထွေးဆုံးသောအရိပ်အဖြစ်တင်စားကြတယ်&hellip;. သို့ပေမယ့် နေရာတိုင်းမှာ ချွင်းချက်ဆိုတာရှိသလို အချို့သောမိဘတွေကြတော့လည်း
အထူးသဖြင့် ဖခင်ဖြစ်သူဟာ မိန်းမကိုအားတိုင်းနှိပ်စက် သားသမားတွေကို ညှင်းပန်းတတ်ကြတဲ့ လူသားမဆန်လွန်းတဲ့သူမျိုးတွေရှိကြတယ်&hellip;. ဒီလိုဖခင်မျိုးရှိတဲ့မိသားစုအဖို့တော့ တကယ့်လောကငရဲပါပဲ&hellip;.. ရီယိုတို့မောင်နှမ (၂)ယောက်လုံးအတွက်လည်း အထက်ကပြောသလို ဖခင်မျိုးပိုင်ဆိုင်ထားရလေတော့ နေ့စဉ်အမျှတကယ့်ငရဲခန်းပါပဲ&hellip;. တစ်နေ့တော့ မိခင်ကို နှိပ်စက်လွန်းတဲ့ဖခင်ကိုမမျှော်လင့်ဘဲ ရီယိုဟာ သတ်မိသွားတယ်&hellip;.. ဒီလိုနဲ့ ဒီ
မောင်နှမ (၂)ယောက်ဟာ အိမ်ကနေထွက်ပြေးခဲ့တယ်&hellip;. ဖခင်ရဲ့ညီဖြစ်သူကလည်း အမဲလိုက်သလို သူတို့ မောင်နှမ(၂)ယောက်နောက်ကိုလိုက်ပါတော့တယ်&hellip;. ဒီမောင်နှမ (၂)ယောက် လွတ်မြောက်မလား
&hellip;ထွက်ပြေးစဉ်အတွင်း ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြုံရမလဲ&hellip;. ရာဇဝတ်သားတွေပေါ်လွန်းတဲ့ခေတ်ဖြစ်တဲ့အပြင် ပြသနာတစ်ခုကြုံတိုင်း သေနတ်ဖောက်ပြီးဖြေရှင်းတဲ့ခေတ်မို့ သူတို့ဘယ်လိုကြုံရမလဲ&hellip;.. တခြားကောင်းဘွိုင် ဂိုဏ်းအဖွဲ့တွေနဲ့ရော ကြုံရမှာလား&hellip;ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး&hellip;</p>
<p>The Poison Rose(2019)&ldquo;ကျွန်တော်က PI တစ်ယောက်ပါ&rdquo; တဲ့ ပြောလိုက်တဲ့သူကို ကြည့်လိုက်တော့ အရက်ပုလင်း တစ်ပုလင်းကိုကိုင်ထားတယ်... အလွတ်စုံထောက်ဆိုတဲ့အတိုင်း သူ့ကို သတ်ချင်နေတဲ့
လူဆိုးတွေလည်း ရှိတာပေါ့&hellip;... လိုက်သတ်နေတဲ့လူတွေဆီကနေ ထွက်ပြေးရင် သူ့ကြောင်ကြီးကို လှောင်အိမ်ထဲထည့်ပြီး မ ပြေးတတ်တယ်&hellip;..သူ့နာမည်က ကာဆင်ဖီးလစ်တဲ့ သူဟာ တစ်ချိန်က တက္ကဆက်မြို့ရဲ့ နာမည်
ကျော် American Football ကစားသမား&hellip; အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် သူ ကစားသမားဘဝကို အဆုံးသတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ သူဟာ တက္ကဆက်မြို့ကို ကျောခိုင်းခဲ့တယ်&hellip;သို့သော်လည်း အလွတ်စုံထောက်တစ်ဦးဖြစ်
တဲ့သူ့ကို လူပျောက်အမှုတစ်ခုအတွက် ငှားယမ်းလိုက်တဲ့သူ ရောက်ရှိလာပြီး သူ့ရဲ့ တက္ကဆက်ပြည်နယ်လေးကို ပြန်လာရဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်&hellip;&hellip;တကယ်တမ်းအမှုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ လူပျောက်အမှုဆိုတာထက် ပိုပြီးနက်နဲတဲ့ မှုခင်းကွင်းဆက်တွေကို တွေ့ရှိလာရာမှာတော့..မင်းသားကြီး John Travolta နဲ့ Morgan Freeman တို့ ပါဝင်ထားပါတယ်&hellip;..</p>
လူငယ်ဆန်ဆန်ဇာတ်ကားလေးကိုစောင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီကားလေးကတော့netflixမှာမကြာသေးခင်ကမှပြသွားတဲ့romanticနဲ့comedyနှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကားလေးတစ်ကားပါ မင်းသားကတော့ကောင်မလေးတွေအကြိုက်riverdaleထဲကမင်းသားလေး KJ Apaပဲဖြစ်ပါတယ်
အထက်တန်းကျောင်းပြီးသွားလို့ တက္ကသိုလ်တက်ဖို့စောင့်ရင်း နွေရာသီအားလပ်ရက်ကိုပုံစံတစ်မျိုးစီကုန်ဆုံးကြမယ့် လူငယ်အုပ်စုအကြောင်းကို ရိုက်ကူးပေးထားတာပါ မတူညီတဲ့ပြဿနာတွေ မိသားစုပြဿနာ,ရည်းစားပြဿနာ,ဘဝအတွက်
ရွေးချယ်မှုတွေနဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ကိုပုံစံတစ်မျိုးစီနဲ့ကြည့်ရမယ့်ကားလေးတစ်ကားပါ သူတို့ဘယ်လိုပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ရမလဲ ဘာတွေကိုစိတ်အလိုမကျရှိလဲ ကိုယ့်ဘဝရည်မှန်းချက်ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်သွားပြီးဆက်လျှောက်မလဲဆိုတာတွေ
The Human Comedy ( 2019 )
<p>ဘဝကို ရိုးရိုးအေးအေး ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ပုထုံ တစ်ယောက်ဟာသူ့အမူအကျင့်အတိုင်း အားနာတတ် ရိုးအလွန်းတာကြောင့် အမှုတွဲထဲပါသွားခဲ့တယ်&hellip;အရင်ဆုံး ပုထုံဘယ်လောက် ရိုးအတယ်ဆိုတာလေး ပြောပြမယ်
နော်&hellip;ကြောက်တတ် အားနာတတ် ရိုးအတတ်လွန်းလို့ ကုမ္ပဏီကလစာ ၃ လစာ မပေးဘဲ အကြွေးထားတာတောင် မတောင်းခဲ့ဘူးလေ&hellip; ဒီလို ပုထုံက&hellip; သူ့ရဲ့ မရသေးတဲ့ ၃ လစာတောင်းရင်းနဲ့ လူမိုက်အဖွဲ့ကိုအကြွေး ၁ သန်းတင်နေတဲ့ ယန်ရှောင်ဝေနဲ့ တွေ့တော့တာပဲ&hellip;ဒီမှာ ဇာတ်လမ်းကစပြီ&hellip;ယန်ရှောင်ဝေဟာ နာမည်ကြီး စီးပွားရေးပညာရှင်ရဲ့သားမိတဆိုးသားလေးဖြစ်ပေမယ့် တစ်ဦးတည်းသော အဖေကြီးရဲ့ ပစ်ပယ်ခြင်း ခံခဲ့ရတယ်အကြွေး ၁
သန်းအတွက်ပါ ဆပ်ပေးဖို့အထိ ပစ်ပယ်ခဲ့တယ်လေ&hellip;ဒါကြောင့် ယန်ရှောင်ဝေက အကြွေး ၁သန်း ကိုယ့်ဘာသာဆပ်ဖို့ကြိုးစားရင်း အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေ ဖြစ်ပြီးဒီဇာတ်ရှုပ်ထဲကို ပုထုံပါဝင်သွားတော့တာပါပဲ&hellip;ဘယ်လိုတွေ
လွဲပြီး ဘယ်လိုရှုပ်တဲ့ ဇာတ်ဆိုတာတော့ဇာတ်လမ်းလေးကြည့်ရင်း အဖြေထုတ်လိုက်ကြပါ</p>
<p>Wine Country(2019)&ldquo;ဟဲ့ မသာမကြီး သေချင်းဆိုးကြီး အနူကြီး ဟိုကောင်မ&rdquo; စတဲ့ ခပ်ရိုင်းရိုင်းအသုံးအနှုံးမျိုးနဲ့</p>
<p>အထူးသဖြင့် State ကျောင်းသား ကျောင်းသူဘဝက သူငယ်ချင်းတွေပေါ့&hellip;</p>
<p>တဖြည်းဖြည်း ကျွန်တော်တို့ငယ်သူချင်းတွေဟာ ဝေးကွာမှန်းမသိဝေးကွာကုန်တယ်..</p>
<p>ဘဝကိုယ်စီရဲ့ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေကို ကစဉ့်ကလျှားမဖြစ်အောင် အံကြိတ်ထမ်းပိုးရင်း</p>
<p>ခင်ဗျားတို့အားလုံး ဒီလိုအဖြစ်မျိုးမကြုံဘူးတဲ့ သူခပ်ရှားရှားပါပဲ&hellip;</p>
<p>ဒီကားထဲမှာတော့ ငယ်ပေါင်းကြီးဖော် သူငယ်ချင်းတွေဟာ သူတို့အုပ်စုထဲက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အသက် ၅၀ပြည့်</p>
<p>တကယ့်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောစရာရှိပြောကြဆိုကြနဲ့ပေါ့&hellip;</p>
<p>ပြန်ဆုံကြတဲ့အခိုက်အတန့်မှာ သူတို့သောင်းကျန်းတဲ့ပုံတွေကိုလည်း ဟာသလေးတွေနှောပြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်&hellip;</p>
<p>90&rsquo;s born အစောပိုင်း ကလေးတွေ ကာတွန်းကားအဖြစ် ခဏခဏ ပြန်ကြည့်ပြီး အသည်းစွဲကြိုက်ခဲ့ရသလို၊ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ 1941 ခုနှစ်ကထွက်ထားတဲ့ Disney&rsquo;s Dumbo ကိုအခြေခံပြီး ယခုလက်ရှိမှ
ာတော့ ဒါရိုက်တာ Tim Burton ကနေပြန်လည်အသက်သွင်းထားပါတယ်။1941 ခုနှစ်တုန်းက Dumbo ကားဟာ ကာတွန်းအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရယူခဲ့ပြီး ယခု Dumbo (2019) ဇာတ်ကားကိုတော့ 3D Animation ရယ် Human Characters တွေရယ် ပေါင်းစပ်ထားပြီး Live Action အနေနဲ့</p>
<p>Walt Disney Studios Motion Pictures ကနေ ဇာတ်လမ်းအတွက် US 170 milion လောက်ကို သုံးထားပြီး ရိုက်ကူးဖြန့်ချီထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ Colin Farrell, Michael Keaton,
Danny DeVito နဲ့ Eva Green တို့က အဓိကပါဝင်ထားပြီး ဇာတ်လမ်းကြာချိန်ကတော့ 112 minutes လောက် ကြာမြင့်မှာဖြစ်တဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။</p>
<p>Dumbo လေးကို အမှတ်မထင်ရထားပေါ်မှာတွေ့မိပြီး မွေးကတည်းက နားရွက်ကလေးက ကြီးနေလို့ အထူးအဆန်း ဆင်ပေါက်ကလေးအနေနဲ့ မိခင်နဲ့ခွဲခံရကာ ဆပ်ကပ်အဖွဲ့ထဲရောက်ခဲ့ရပါတယ်။</p>
<p>အဲ့အချိန်မှာ Dumbo လေးက သူ့ဟာသူရော ဘယ်သူကမှပါ ပျံသန်းတတ်တာမသိကြသေးပါဘူး&hellip; Dumbo လေးက ချစ်စရာလေးမို့ကလေးလေးတွေနဲ့ဆော့ရင်း မတော်တဆပျံသန်းမိခဲ့သလို့ဖြစ်ခဲ့ရာကနေ Dumbo ရှိတဲ့ဆပ်ကပ်လေးက လူသိများလာတဲ့အခါ&hellip;ဆပ်ကပ်အဖွဲ့ရဲ့နောက်ကွယ်ဇာတ်လမ်းတွေအပေါ်မှာ Dumbo လေး ဘာတွေဆက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကိုတော့။</p>
The Wolf Call 2019
Rating 7.7 အထိရရှိထားတဲ့ ပြင်သစ် Action/Drama/Thriller ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ ရေငုတ်သင်္ဘောသားတွေကိုအခြေပြုပြီးရိုက်ကူးထားတာပါ။ ရေငုတ်သင်္ဘောတစ်စီးမှာ Sonar ဆိုတဲ့ Radar ကဲ့သို့သော Detection and Navigation လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ အသံလှိုင်းသုံးကိရိယာတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကနေရလာတဲ့အသံလှိုင်းတွေကိုကြည့်ပြီး ဒါဟာဘယ်ကလာတဲ့အသံ…
ဘယ်လိုရေယာဉ်အမျိုးအစားဆိုတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရတဲ့ Analyst တွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒီကားလေးမှာတော့ အဲလို အသံလှိုင်းစီစစ်ရတဲ့သူဖြစ်တဲ့ ချန်တာရိန်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးကိုတည်ထားပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကယ်တင်သွားလဲဆိုတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ Drama/Thriller ဆိုတဲ့အတိုင်း ကောင်းကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နားပါးလှပါတယ်တဲ့သူကိုမှ ဘယ်လိုလှည့်စားပြီးကမ္ဘာပျက်ကိန်းရောက်အောင် ဘယ်သူတွေလုပ်သွားလဲ။ ဘယ်လိုပြန်လည်ဟန့်တားရလဲဆိုတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။
( ရေတပ်ဆိုက်ရာအသုံးအနှုန်းတွေပါဝင်တဲ့အတွက် အဓိပ္ပါယ်တစ်ချို့ကွဲလွဲတာမျိုး ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်အောင်ဘာသာပြန်ထားပေမယ့် ကွဲလွဲတာရှိရင်သည်းခံပေးကြပါ။) (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်ပေးထားသူကတော့ ကိုသူရ ပါ)
ဒီကားလေးဟာ Imdb 5.4ရထားတဲ့ 2019 ထွက်ဟောင်ကောင်ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်လက်ဝှေ့ထိုးသတ်ပွဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးတွေကြိုက်တတ်သူတွေအတွက်တော့ အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ..ဒီကားထဲမှာ ဂျက်နဲ့ ဘန်နီတို့ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ဟာ
မိဘမဲ့ဂေဟာမှာကြီးပြင်းခဲ့ရပြီး တစ်နေ့မှာ ကျောင်းသားချင်းအနိုင်ကျင့်ခံရာကနေကျောင်းစောင့်် အီရစ်နဲ့အတူ မိဘမဲ့ဂေဟာကနေထွက်ခွာလာခဲ့ပါတော့တယ်..ဒီလိုနဲ့ အားကစားလေ့ကျင့်ခန်းမ ဖွင့်ထားတဲ့ အီရစ်ရဲ့အစ်မဆီရောက်သွားရာကနေ လက်ဝှေ့သမားကောင်းဖြစ်လာဖို့ စတင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါတော့တယ်…ဒီလိုနဲ့တစ်ရက်မှာသူတို့မွေးစားအဖေအီရစ်ဟာလေဖြတ်သွားခဲ့ပြီးငွေကြေးရှာဖွေမှုတာဝန်ဟာသူတို့ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ပေါ်ကိုပုံကကျလာခဲ့ပါတော့တယ်
…ဂျက်ဟာ အလုပ်လုပ်ရင်းMMAမှာထိုးသတ်တဲ့ပရိုလက်ဝှေ့သမားကောင်းဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်နေခဲ့ပြီးသူ့ညီကိုစာကောင်းစွာသင်နိုင်အောင်ထောက်ပံံ့ပေးနေပေမယ့်….သူ့ညီလေးကတော့ ငွေကြေးခက်ခဲမှုကိုကူညီနိုင်ဖို့အတွက်မြေအောက်ကြေးစားလက်ဝှေ့ထိုးသတ်ပွဲတွေမှာပါဝင်ကစားပြီးငွေကြေးရှာဖွေနေခဲ့လို့ကျောင်းကထုတ်ပယ်ခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်…
ဒီလိုနဲ့ သူတို့ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ကြားမှာသဘောထားတင်းမာမှုတွေဖြစ်လာခဲ့တဲ့အခါ….ဂျက်က MMAရဲ့ ပရိုလက်ဝှေ့ချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့ပေမယ့်သူတစ်ချိန်ကအလွယ်တကူအလဲထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ဂျက်ဆန်ရဲ့ပြန်လည်စိန်ခေါ်ပွဲမှာ မထင်မှတ်ပဲရှုံးနိမ့်သွားတဲ့အခါ…..ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်လာမှာလဲ…လက်ဝှေ့ထိုးသတ်ပွဲတွေကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်……ပရိုလက်ဝှေ့သမားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလက်တွေ့ကျကျရိုက်ပြထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လို့ အရမ်းကိုသဘောကျမိပါတယ်… Translated & Review By Phyo ZawEncoded By LK
ဒီဟီးရိုးကတော့ မှော်အစွမ်းကို အခြေခံထားတာပါပဲ။ Shazam လို့အော်လိုက်ရင် 14 နှစ်သားကောင်လေးအဖြစ်ငးကနေ လူကြီးအရွယ် စူပါဟီးရိုးအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ မှော်ဆရာအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုရဲ့ နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ မှော်ဆရာဟာ ကမ္ဘာကြီးကို နတ်ဆိုး ၇ ပါးရန်ကနေ ကာကွယ်ထားရပါတယ်။
သူ့ရဲ့အစွမ်းတွေ အားနည်းလာချိန်မှာတော့ သူ့နေရာကိုဆက်ခံဖို့ စိတ်ထားကောင်းမွန်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ရှာဖွေရပါတော့တယ်။ ဒီဟီးရိုးကတော့ Justice League သာ ဆက်ထွက်ခဲ့ရင် ပါလာနိုင်တာမို့ သူ့ရဲ့ မူလဇစ်မြစ်ကို ဒီကားမှာ သေချာတွေ့ရမှာပါ။ (Littleneo ဘာသာပြန်သည်)
“သူနဲ့ မတွေ့ခင်က ကျွန်မဘဝဟာ… အရမ်းကို ရိုးရှင်းပြီး ပုံသေ သတ်မှတ်ထားပြီးသားပါ… အခုတော့ သူနဲ့ တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်း… သူနဲ့ တွေ့ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ဆိုတာပဲ… ရှိတော့တယ်” “ကျွန်တော့်ဘဝမှာ ဝတ္ထုပေါင်းများစွာ ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်… အများစုက အချစ်ဆိုတာ စကြဝဠာကြီးရဲ့ ဗဟိုချက်လို့ ပြောကြပါတယ်… အချစ်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အတွင်းဒဏ်ရာတွေကို ကုစားပေးနိုင်တယ်…
အချစ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ အသက်ရှင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အရာပါပဲတဲ့… သူနဲ့ မတွေ့ခင်အထိ ကျွန်တော့်ကို အခြားတစ်ယောက်က… လုံးဝဖမ်းစားသွားနိုင်မယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မထင်ခဲ့ဖူးပါဘူး” ဒီတစ်ခါတော့ ရိုမက်တစ်ဆန်ဆန် အချစ်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် After ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် တက်ဆာဆိုတဲ့ စာတော်ပြီး အမေစိတ်တိုင်းကျ ကြိုးစားနေတဲ့ စာကြမ်းပိုးမလေးတစ်ယောက် ကောလိပ်ကို ရောက်လာတာက ဇာတ်လမ်းကို စတည်ထားပါတယ်
အမေဖြစ်သူက စီစဉ်တဲ့အတိုင်း ဘဝကို နေထိုင်ရင်း ဟာဒင်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ သူဘာတွေ ပြောင်းလဲ သွားမှာလဲ ဟာဒင်ကရော ဘယ်လိုကောင်လေးလဲဆိုတာတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါ ဇာတ်ကားအနှစ်သာရ ပျက်သွားမှာ စိုးလို့ အများကြီး မညွှန်းပေးတော့ပါဘူးစကြည့်မိတာနဲ့ လုံးဝနစ်မျောသွားမယ့် အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပါ ကြည့်ပြီး နောင်တမရစေရမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်လို့ လက်မလွတ်တမ်း ကြည့်ကြဖို့ ညွှန်းပေးပါရစေ (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်ပေးထားသူကတော့ May Tharaphi Lwin ပါ)
2019ခုနှစ်မှာ Endgame နဲ့ အပြိုင် ရုံတင်ပြီးဝေဖန်မှု အမျိုးမျိုး ကြုံခဲ့ရတဲ့ ဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ကားကြီး တစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ပါဝင်ကြတဲ့ မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုတော့အထူးတလည် မိတ်ဆက်စရာ မလိုဘူး ထင်ပါတယ်။ဇာတ်ကောင် တစ်ခုချင်းစီကို မိတ်ဆက်ပေးရမယ် ဆိုရင်ဇဖာရ်(ဗာရွန်)ကတော့ ပန်းပဲဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးပြည်တန်ဆာတွေနဲ့ ရင်းနှီးနေတဲ့ နာမည်ဆိုးရပ်ကွက်နေ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တစ်ယောက်၊မိဘစွန့်ပစ်
ခံ(တရားမဝင်မွေးဖွားသူ) အဖြစ် မြင်တွေ့ရမှာပါ။အလီယာကိုတော့ နာကျင်မှုတွေနဲ့ ခံစားနေရတဲ့ရု(ပ်) အဖြစ် မြင်ရမှာပါ။
အစ်မတော်ရဲ့ နောက်ဆုံးဆန္ဒကို ဘဝနဲ့ ရင်းပြီးဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ရသူပါ။ဆန်းဂျေးကိုတော့ ရု(ပ်)ရဲ့ ယောက္ခမ နေရာမှာမြင်ရမှာပါ။အာဒိသယကိုတော့ ဆန်ဂျေးရဲ့သား သတင်းစာတိုက်ပိုင်ရှင် ဒေ့ဗ်အဖြစ် မြင်တွေ့ရမှာပါ။ဒေ့ဗ်ဟာ မင်းသမီး
ကြီး Sonakshi (ဆာ့သ်ယာ)ရဲ့ခင်ပွန်းပါ။တစ်ဖက်မှာ အိန္ဒိယသွေးစည်းရေးကို ကြိုးပမ်းနေပြီးတစ်ဖက်မှာ ဇနီးဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းနေကြသူတွေပါ။ဟီး တော်တော် နားလည်ရခက်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေဗျ။ဒီလိုနဲ့ အလီယာမှာ ဆန္ဒတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒါကလည်း ဇာတ်လမ်းကို အထွတ်အထိပ်ထိဆွဲခေါ်သွားမယ့် ဆန္ဒတစ်ခုပါ။သူတို့တွေရဲ့ အရှုပ်တော်ပုံကြီးကိုမျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့ခံစား ကြည့်ကြပါဦးဗျာ။ဝေဖန်မှုတွေ မျိုးစုံ ခံခဲ့ရပေမဲ့တချို့အတွက်တော့ အကြိုက်မတွေ့နိုင်
ပေမဲ့တချို့အတွက်လည်း မညိုငြင်ရက်စရာ ဖြစ်နေမှာမို့Spoiler တွေ မန့်မသွားဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။(အညွန်း အားနည်းနေရင် အချိန်မရလို့ဆိုတာခွင့်လွတ်ပေးပါ။တစ်ညတည်း အပြီး ဘာသာပြန်ခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာသား တစ်စုံတစ်ရာ လိုအပ်ချက်ရှိရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ။) (အညွန်းနဲ့ ဘာသာပြန်ကတော့ Myint Thu နဲ့ Nyi Nyi Koe တို့ ညီအစ်ကိုပါ)
ဘတ်ဒီဂရင်းဆိုတဲ့သူဟာ သူချစ်ခင်မြတ်နိုးလှတဲ့ တစ်ကိုယ်တော်လူရွှင်တော်အလုပ်ကို နှစ်ပေါင်း၅၀လောက်ရပ်နားထားရာကနေ သူရဲ့သူငယ်ချင်းဟောင်းဖြစ်သူ အယ်လ်ဟာ့ဆိုတဲ့သူနဲ့တွေ့ဆုံပြီး အယ်လ်ရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့် လူရွှင်တော်အလုပ်ကို ပြန်လုပ်ဖြစ်သောအခါ…
နှစ်အတန်ကြာရပ်နားပြီးယခုမှပြန်လုပ်ရသော ဘတ်ဒီ့အဖို့ လွယ်ကူပါ့မလား… ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိနေမလဲ… သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကရော မှန်ကန်နိုင်ပါ့မလား… လူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်သဘောကျနှစ်သက်ရတဲ့အလုပ်ကို လုပ်နေရရင် အပျော်ရွှင်ဆုံးဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာရော လက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ပါ့မလား… ဒါ့အပြင်ဒီကားထဲမှာ ဘတ်ဒီနဲ့အယ်လ်ဟာ အသက်သာကြီးနေပေမယ့် စိတ်ကတော့နုပျိုနေဆဲဖြစ်တာကြောင့် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ပုံလေးတွေကလဲ ကြည့်ရှှုသူတွေကိုရယ်မောပျော်ရွှင်စေရမှာပါ
ဥရောပအလယ်ပိုင်းက မထင်မရှားနိုင်ငံတစ်ခုကတော်ဝင်မင်းသမီးလေး ကာလီဟာသူရဲ့ နန်းတွင်းတော်ဝင်အရေးအရာတွေကနေတစ်နှစ်တိတိ ခွင့်ယူပြီး နိုင်ငံရပ်ခြားကရေခဲတောင်အပန်းဖြေရိပ်သာတစ်ခုမှာ
ပွဲစီစဉ်သူအဖြစ် တိတ်တဆိတ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်..။မွေးကတည်းက ပြဌာန်းလိုက်ပြီးသား ဘဝတစ်ခုကနေခဏတာ သွေဖည်ပြီး ကိုယ်တိုင် ဘာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေဖို့ရာ စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ ကာလီလေးဟာတကယ်တမ်းမှာတော့ လုံလောက်တဲ့ အခွင့်အရေးမျိုးကိုတစ်နှစ်အတွင်းမှာ မရရှိခဲ့ရှာပါဘူး။ပြန်ရမယ့်ရက်နီးလာခါမှ ကြုံတောင့်ကြုံခဲပွဲတော်ကြီးတစ်ခုကိုစီစဉ်ပေးရဖို့ဖြစ်လာပါတယ်..။သာမန်သူအဖြစ် ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စနဲ့ ကြိုးစားပြချင်တဲ့ကာလီ
လေး ဒီအခွင့်အရေးကို အမိအရဆုပ်ကိုင်နိုင်မှာလား..။ဒါ့အပြင် သူနဲ့ အတူ လက်တွဲလုပ်ကိုင်ရမယ့် တွဲဖက်ကိုလူချောတစ်ယောက်လည်းပါလာပါတယ်။သူ့ရဲ့ ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့ မင်းသမီးဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တစ်ခုကိုရော အဆုံးထိ လျှို့ဝှက်သွားနိုင်မှာလား..။ရေခဲပြင်ကျယ်ကြီးတွေ နှင်းပွင့်နင်းမှုံတွေနဲ့ အေးစိမ့်စိမ့်ပတ်ဝန်းကျင်နောက်ခံကိုကြည်နူးငွေ့လေးဟပ်ပြီးကြည့်ရှုကြရမယ့်ရိုမန့်ကားလေးတစ်ကားပါ။ဒီရုပ်ရှင်ကားကို ဘာသာပြန်ပြီးအညွှန်းရေးပေးထားတာကတော့Sane Khet ဖြစ်ပါတယ်
ဒီရုပ်ရှင်လေးဟာဆိုရင် စပိန် ရိုမန်စ့်အတ္ထုပ္ပတ္တိ ဆန်ဆန် ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်၁၉၀၀ ပြည့် ဝန်းကျင်တွေမှာ အမျိုးသမီးတွေကိုပညာသင်ကြားခြင်းနဲ့ပတ်သတ်လို့ ရှေးရိုးစွဲအယူအဆများ ရှိနေတုန်းပဲ
ဆိုတာကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ထူးခြားချက်ကတော့အဓိက ဇာတ်ရုပ်ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဟာလိင်တူချစ်ကြိုက်မှု အပေါ် ပြင်းထန်စွာတုန့်ပြန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၀၀ ဝန်းကျင် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး တရားဝင်လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ Lesbian စုံတွဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်းတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကြားထဲမှာ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ တည့်မြဲခဲ့သလဲဆိုတာကိုကြည့်ရှူခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ဖိနိုပ်တွေကြောင့်
စပိန်နိုင်ငံမှပေါ်တူကီ နိုင်ငံအထိ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတာတွေထောင်ကြခဲ့ရတာတွေ နောက်ဆုံး အကျဉ်းထောင်ထဲတွင်မီးဖွားရသည်အထိ အခြေအနေဆိုးခဲ့သည် တိုင်အောင်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက ခိုင်မြဲခဲ့သည်(ဒီကိုယ်ဝန်ရသွားခြင်းကလည်း ထူးခြားသည့်အချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်)မွေးရပ်မြေ စပိန်တွင် ကံဆိုးမိုးမှောက်ကျခဲ့ရသမျှ သည် ပေါ်တူဂီမြေပေါ်တွင် စာနာသနားသူများအကူအညီများစွာနှင့်လွတ်မြောက်ခဲ့ရပြီး အာဂျင်တီးနားတွင်
အသက်ထက်ဆုံးနေထိုင်ခဲ့ကြသည့်အီလီဆာ နှင် မာဆီလာတို့ စုံတွဲ အကြောင်း ကို ဖော်ကျူးထားသည် ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်18+ အသက်၁၈ နှစ်မပြည့်သူများ ကြည့်ရှူရန်မသင့်သည့် ဇာတ်ဝင်ခန်းများပါရှိသည်ရုပ်ရှင်ကားကို Nyan Lin Oo မှ ဘာသာပြန်ပေးထားပြီးအညွှန်းကိုလဲ ကိုယ်တိုင်ရေးပေးထားပါတယ်
CM Daughter Of The Wolf 2019
စစ်တပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ကလယ်ရာဟာ တစ်နေ့သူ့အဖေဆုံးပါးသွားသည်ကိုသိရှိပြီးအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်… သို့သော်လဲတစ်ပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်ဆိုသလို အိမ်ပြန်ရောက်ပြီး ဘယ်လောက်မှမကြာခင်မှာပဲ သူ့သားချာလီပြန်ပေးဆွဲခံလိုက်ရပါတယ်… ပြန်ပေးဆွဲသမားများထဲမှတစ်ယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ သူ့သားနောက်ကိုခြေရာခံလိုက်လာသော ကလယ်ရာတစ်ယောက် အောင်မြင်နိုင်ပါ့မလား… ပြန်ပေးဆွဲသမားတွေရဲ့ရယ်ရွယ်ချက်အစစ်အမှန်ကရောဘာဖြစ်မလဲ… ကလယ်ရာ့စီမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပြန်ပေးဆွဲသမားကရော ကလယ်ရာ့ကိုဘာကြောင့်ကူညီခဲ့ရတာလဲ… ဒီကားမှာသားကိုချစ်လွန်းလှသောမိခင်မိန်းမသားတစ်ယောက် ချမ်းအေးလွန်းလှသည့်နှင်းများဖုံးလွှမ်းရာဒေသမှာ အချိန်မရွေးထွက်လာရန်ပြုနိုင်သောနှင်းတောင်ဝံပုလွေများကိုအံတုရင်ဆိုင်ပုံများကိုတွေ့မြင်နိုင်မှာပါ
Rocketman(2019)IMDb….7.7,,,,,Rotten….89%ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ Bohemian Rhapsody လိုပဲ ကမ္ဘာကျော် အဆိုတော်တစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်မှာပါ။ သရုပ်ဆောင်ကတော့ Kingsman ရဲ့မင်းသားTaron Egerton ဖြစ်နေတာ တိုက်ဆိုင်တာပါပဲ။ Kingsman ရုပ်ရှင်ထဲမှာ အယ်လ်တန်ဂျွန်ပါခဲ့တာကိုး။ သူ့နာမည်ကတော့ အယ်လ်တန် ဂျွန်ပါ။ လူအများကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံဆိုရင်တော့ဆာ အယ်လ်တန် ဟာကျူလီ ဂျွန် ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အမေရိကရဲ့ ရော့ခ်ဂီတသမိုင်းမှာ အအောင်မြင်ဆုံးတစ်ကိုယ်တော်ဂီတသမားဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ဂီတသမိုင်းမှာ တတိယမြောက် အအောင်မြင်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရှေ့မှာ မက်ဒေါနား နဲ့ဘီတယ်စ် ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ (မကြာခင် ဘီတယ်စ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ Yesterday ရုပ်ရှင်လည်း ရုံတင်တော့မှာပါ) အယ်လ်တန်ဟာ ဂရမ်မီဆု 5ကြိမ်ရရှိခဲ့ပြီး အခြားသော ဆုကြီးတွေလည်း အများအပြားကို ရရှိခဲ့တာပါ။ Gold album 26 ခု၊ပလက်တီနမ် နဲ့ မာလ်တိုင်ပလက်တီနမ် ၃၈ ခု၊ ဒိုင်းမွန်း တစ်ခု ရရှိဖူးပြီး ကမ္ဘာ့အခွေရောင်းရမှုအရေအတွက်သန်း ၃၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်မှာတော့ သူ့ရဲ့ ငယ်ဘဝ၊ အောင်မြင်အောင် ရုန်းကန်ရပုံ၊ အောင်မြင်ပြီးနောက်ထုံးစံအတိုင်းခံစားရတဲ့ အောင်မြင်မှုဒဏ်တွေ၊ အထီးကျန်မှုတွေ၊ ဆေးနဲ့အရက်ပြဿနာတွေ၊ လိင်ကိစ္စအရှုပ်အရှင်းတွေ ကနေရုန်းထွက်ပြီး သာယာတဲ့ ဘဝကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပုံအထိ ပြထားတာပါပဲ။သူက ဖရက်ဒီမာကျူရီထက်တော့ ကံကောင်းခဲ့တယ်ပဲ ပြောလို့ရမလား မသိပါဘူး။ဂီတရုပ်ရှင် ကြိုက်သူတွေအတွက်တော့ သီချင်းတွေနဲ့တင် တန်လှပါပြီလို့ ပြောရမှာပါပဲ။ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Littleneo ပဲဖြစ်ပါတယ်…
There is no place like home 2019
ဂေါ်ဇီလာရုပ်ရှင်တော်တော်များများကို ကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖူးကြပါတယ်.. ကြည့်လိုက်တိုင်းလည်း လူသားတွေရဲ့ဲပြသနာရှာမှု့တွေကိုဂေါ်ဇီလာကပဲ လိုက်ဖြေရှင်းတိုက်ခိုက်ပေးနေရတာပါ…ပြောရမယ်ဆိုရင် လူသားတွေကတိုက်တန်ကြီးတွေကိုမုန်းတယ်ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းပြသနာတက်လာခဲ့ရင်လည်း အဲဒီတိုက်တန်တွေရဲ့ဘုရင်ကြီးကပဲ ထွက်လာရတာပါပဲ….အဲချိန်ကျမှ ဟေးခနဲ ဝါးခနဲ အသံတွေနဲ့ပျော်နေကြတာလည်းလူသားတွေပါပဲ..ဒီကားမှာလည်း နဂိုထဲကပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့Ghidorah (ခေါင်းသုံးလုံးနဂါး) ကိုထွက်လာအောင်သွားလုပ်လို့ဘုရင်ကြီးကပဲ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်ပြီးထွက်ကယ်ရပြန်ပါတယ်….အသေချကြပါတယ်….. အကောင်ကြီးတွေချတာကြည့်ပြီး ကြက်သီးလည်းထတယ်..အကောင်းဆုံးကတော့ ဂေါ်ဇီလာရဲ့ theme song ပြန်ပါလာပါတယ်….အဲအသံကိုကြားတဲ့ချိန်ပျော်တယ်ဆိုတာထက် မိုက်တယ်ကွာလို့တောင် ပြောမိတယ်….ကျွန်တော်တို့ ဟာခနဲ ဟင်ခနဲ ဖြစ်သွားစေတဲ့ Epic Battle တစ်ခုကိုခံစားပြီးပါပြီ…End Game က Final Scene ပါ….နောက် Epic Battle တစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်တော့ဒီကားထဲက Godzilla နဲ့ Ghidorah (ခေါင်းသုံးလုံးနဂါး) တို့ရဲ့တိုက်ပွဲပါပဲ…တကယ်လည်းမိုက်တယ် …. အသေချတယ်….ကြည့်ရတဲ့လူအဖို့ ဂေါ်ကြီးနိုင်ပါစေ ….ဂေါ်ကြီးထိသွားရင်လည်း ဟာခနဲဖြစ်ပြီးရင်ခုန်ပြီးကြည့်နေရတာပါ….ဒီကားက တိုက်တန်ကြီးတွေချတာကိုကြည့်တာနဲ့တင်လုံးဝတန်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကားလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်…ဒါကြောင့် ဒီကားရဲ့ ဇာတ်လမ်းအကြောင်းကိုအားလုံးလည်းနားလည်အောင် အနည်းငယ်တင်ဆက်ပေးပါရစေ…ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ ၂၀၁၄ ဂေါ်ဇီလာကားရဲ့ အဆက်ဖြစ်ပြီးတော့Rating 6.6 ရရှိထားပါတယ်..Rating နည်းတာကိုမကြည့်ပါနဲ့…တိုက်တန်ကြီးတွေရဲ့Battle တွေကိုကြည့်ကြည့်ပါ…လုံးဝအလန်းကြီးတွေပါ………ဇာတ်လမ်းသဘောအရတော့ ဂေါ်ဇီလာနဲ့ တိုက်တန်အချို့တိုက်ပွဲအပြီးမှာ မိုနာ့ခ် အဖွဲ့ကြီးဟာ အခြားသော တိုက်တန်တွေကို ရှာဖွေထိန်းသိမ်းနေကြပါတယ်။ ဒေါက်တာ အမ်မာကတော့ တိုက်တန်တွေကို အမိန့်ပေးနိုင်မယ့် အော်ကာလို့ ခေါ်တဲ့ စက်တစ်မျိုးကို တီထွင်နိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီစက်ကနေ ဂီဒီုရာနိုးထလာပြီး အခြားတိုက်တန်တွေရဲ့ ဘုရင်နေရာအတွက် ဂေါ်ဇီလာနဲ့ အားပြိုင်မှုတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်……( Openload နဲ့ဒေါင်းတဲ့လူများ အခုတင်တင်ချင်းတစ်ရက်အတွင်းဒေါင်းစေချင်ပါတယ်..နောက်ရက်တွေက ပျက်မှာသေချာတဲ့အတွက် ဒေါင်းလို့ရမှာမဟုတ်လောက်ပါဘူး….)
Zhi Shen 2019
အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ကားလေးကတော့ မှော်သိုင်းကားတစ်ကားပါ ဒီကားက တရုတ်သိုင်းကားတွေကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့သဘောကျမယ့်ကားမျိူးပါဇာတ်လမ်းရဲ့အစမှာတော့ယွမ်ခေတ်ရဲ့၁၂နှစ်မြောက်မှာအုပ်စိုးတဲ့ကျောက်ဘုရင်လက်ထက်မှာမိစ္ဆာဂိုဏ်းတွေက ပြည်သူတွေညင်းပန်းနိုပ်စက်တာကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက် ကျောက်ဘုရင်က မိစ္ဆာနိုမ်နင်းရေးအဖွဲကိုစေခိုင်းခဲ့တယ်မိစ္ဆာနှိမ်နင်းရေးအဖွဲခေါင်းဆောင်ဘကျန်းချန်းကစစ်မှုးရှောင်ကျန်းကို ယိုကျုံးကိုလျိုဝှက်ပြီးတိုက်ခိုက်စေတဲ့အခါအဲကိုသွားတိုက်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ဘာတွေဖြစ်မှာလဲလျိူဝှက်တိုက်ဖို့လွှတ်လိုက်တဲ့ ၄ယောက်ကရောဘယ်လိုမျိူးလဲတိုက်ပွဲပြီးပြန်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက် ဘယ်လိုမျိူးတွေကြုံရမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရမယ့်ကားမျိူးပါသိုင်းကားဆိုပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ drama နည်းနည်းလေးထည့်ပြီးရိုက်ထားတော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကားမျိူးမို့ကြည့်သင့်တဲ့ကားကောင်းတစ်ကားပါ
မန်ဒီဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးဟာ ကျောင်းဘတ်စကတ်ဘောအသင်းဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေလည်းတွယ်တာတတ်သူပါ တစ်ရက်မှာတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပါတီလုပ်ရင်း လူမသိ သူမသိအောင် မှောက်သွားခဲ့ပါတယ်
နိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ သူ့အိမ်ရှေ့မြက်ခင်းပြင်ပေါ် လှဲနေရက်သား အနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဘာတွေဖြစ်ခဲ့မှန်းလည်း သူ့မှာမမှတ်မိနိုင်အောင်ပါပဲ ဒီတိုင်းမူးပြီးမှောက်သွားတာလို့ထင်နေခဲ့ပြီးမှ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ ဒဏ်ရာတွေလည်းတွေ့ပြီး သူ့ကိုအရှက်ရစေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုလည်း သူငယ်ချင်းတွေကြား ပျံ့နှံ့လာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့… အကြီးမားဆုံးပြဿနာက ဘာတွေဖြစ်ခဲ့မှန်းသူမမှတ်မိတာပါ စိတ်ရောဂါကုထုံးတွေ..အိပ်မွေ့ချကုထုံးတွေခံယူခဲ့တာတောင် သူဟာဘယ်လိုမှ အဲဒီညအဖြစ်အပျက်ကို ပြန်လည်တွေးတောလို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး နောက်ဆုံးမိဘတွေသိသွားတဲ့အခါမှာ အဓမ္မမှုအဖြစ် ယူဆပြီး အမှုဖွင့်ခဲ့ပေမယ့် ဘယ်သူဆိုတာကတော့ ဘဲဥကို အစရှာရသလိုပါပဲ အားလုံးကလည်းရင်းနှီးနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေပဲ ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတော့ ရှု့ပ်ထွေးကုန်ပြီး ဆက်ဆံရေးတွေလည်းပျက်ပြားကုန်ပါတော့တယ် တကယ့်တရားခံကိုသူရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါ့မလား ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို သူပြန်မှတ်မိနိုင်ပါ့မလား အဖြစ်မှန်တွေပေါ်ပေါက်လာမလား ဆိုတာကို ဒီဇာတ်ကားမှာ ကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်….
President and Housemaid 2019
2019 ထွက် တရုတ်အချစ် Romance ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ကနေအစစအရာရာအကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ချမ်းသာတဲ့မိသားစုကသခင်လေးဆန့်ယွီမင်ကလိုချင်တာအကုန်ရနေတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲအဆိုတော်ဖြစ်ချင်တဲ့ကိုယ့်အိမ်မက်ကိုလက်လွှတ်လိုက်ရတဲ့ဆန့်ကူလုပ်ငန်းစုအမွေဆက်ခံသူသူဌေးသားလေးဆန့်ယွီမင်….. ကားမတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးသစ်ပင်လူသားဖြစ်သွားတဲ့အဖေရဲ့လစဉ်ကုန်ကျနေတဲ့ဆေးကုသစရိတ်အတွက်ငွေကိုကြိုးစားရှာနေရတဲ့မာနမင်းသမီးလေးရှကျင်ရှင်း…..မိဘတွေရဲ့စီးပွားရေးပတ်သက်မှုကြောင့်မကြိုက်ပေမဲ့ဆန့်ယွီမင်ကိုသတို့သားလောင်းအဖြစ်လက်ခံထားရတဲ့ရှကျင်ရှင်းရဲ့သူငယ်ချင်းသူဌေးသမီးချန်းစူးယောင်…..တနေ့ငွေလိုအပ်နေတဲ့မာနမင်းသမီးလေးရှကျင်ရှင်းက မောက်မာထောင်လွှားတဲ့သူဌေးသားဆန့်ယွီမင်အိမ်မှာလျို့ဝှက်စာချုပ်နဲ့အိမ်ထိန်းသွားလုပ်ဖို့ဖြစ်လာသောအခါ…ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်ကြမယ်ဆိုတာ ဆက်လက်ခံစားကြည့်ရှုပါ
ဒီကားလေးကတော့ ထောက်လှမ်းရေးဇာတ်လမ်းနဲ့ Mystery/Thriller ဇာတ်ကားသစ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ အေးအေး ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ကြည့်မယ့်ဇာတ်ကားပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ရေချယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇာဝင်ကြောင့် Mossad လို့ခေါ်တဲအစ္စရေးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ရဲ့မျက်စိကျခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ ဂျုးလူမျိုးလည်းမဟုတ်၊ အစ္စရေးနိုင်ငံသားလည်းမဟုတ်
ဂျာမနီမှာနေပြီးဒီလိုအဖွဲ့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာ ထူးဆန်းပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့သူ့ကိုအီရန်ကိုလွှတ်ပြီးသူလျှိုလုပ်ခိုင်းဖို့ အသေးစား စစ်ဆင်ရေးတွေနဲ့စခိုင်းရာကနေ တဖြေးဖြေးသူ့ထမ်းဆောင်ရတဲ့စစ်ဆင်ရေးဟာ အရေးကြီးလာပြီးအထိအခိုက်မခံတဲ့စစ်ဆင်ရေးဖြစ်သွားပြီးနောက်…ဌာနချုပ်နဲ့ ရေချယ်နဲ့ သူ့ရဲ့အထက်အရာရှိဖြစ်သူသောမတ်စ်တို့ကြားမီးပွားတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အဲဒီမီးပွားဟာအစ္စရေးနိုင်ငံကိုခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်စေတဲ့အထိ ဖြစ်လာတဲ့နောက်မှာတော့ ရေချယ်ဆိုတာဘယ်လိုအမျိုးသမီးလဲ….သူနဲ့ Mossad တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုလဲ…အီရန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးတစ်စေ့တစ်စောင်းတွေနဲ့အတူတွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဇာတ်ရှိန်အေးအေးနဲ့ပဲကြည့်ရမယ့်ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
High School Musical လို သီချင်းတွေဝေဝေဆာဆာနဲ့ဇာတ်ကားမျိုးကိုနှစ်သက်ရင်
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဒီကားလေးရဲ့ prequels ၂ကားကိုကြည့်ဖူးရင်သိကြမှာပါ
ဘန်ကတော့ beauty ဘဲလ် and the beast ရဲ့သားတော်ပါ
သူတို့နှစ်ယောက်က မတူညီတဲ့နေရာနှစ်ခုက ပေါက်ဖွားလာပေမယ့်
အဲ့ဒါကိုမကျေနပ်နိုင်သူကတော့ Sleeping Beauty အော်ရိုရာရဲ့သမီးတော်ပါပဲ
ဒီဇာတ်လမ်းဟာ ချယ်လ်ဆီးမန်းနင်း ဆိုတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ အတွင်းရေးတွေကို ဖွင့်ချခဲ့တဲ့လူ တစ်ယောက်အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ (Documentary) နိုင်ငံရေး မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် အမေရိကန်က Snowden (စနိုးဒန်) တို့ ဆိုရင်တော့ မသိသူ မရှိသလောက်ပါပဲ။ အမေရိကန်ရဲ့ နိုင်ငံရေး အမွှေစိန်ကြီးများပေါ့လေ။ အဲဒီလို အမွှေစိန်များထဲကမှ Bradley Manning တစ်ဖြစ်လဲ လိင်ပြောင်းခွဲစိတ်မှုခံယူထားသူ Chelsea Manning (ချယ်လ်ဆီး မန်းနင်း) ဆိုတာကတော့ အမေရိကန် စစ်သား အဲလေ.. စစ်သမီး (ထားပါတော့ whatever)တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အီရတ်စစ်ပွဲ အာဖဂန်စစ်ပွဲတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေအပါအဝင် အမေရိကန် အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို WikiLeaks ဝီကီလိခ် လို့ခေါ်တဲ့ ထိပ်တန်းသတင်းများပေါက်ကြားရာ ဝက်ဘ် တစ်ခုဆီကို ပေးပို့ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပေးပို့လိုက်တဲ့ စစ်ရေး နိုင်ငံရေးသတင်းတွေကို စစ်ကြည့်လိုက်တော့ Document ပေါင်း ၇၀၀၀၀၀ (၇သိန်းကျော်)ခန့် ရှိပါသတဲ့။ အဲဒီလိုပေါက်ကြားစေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ၂၀၁၀ခုနှစ်မှာ အကျဉ်းချခံခဲ့ရပြီး ၂၀၁၇မှာတော့ လျှော့ပေါ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ ပြန်လွတ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စတွေ စဖြစ်တုန်းကတော့ သူက Bradley Manning ဘဝပဲရှိသေးတာပေါ့လေ။ ၂၀၁၃ မှာတော့ သူဟာ ငယ်စဉ်တည်းက အမျိုးသမီးလိုနေချင်သူဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီး ချယ်လ်ဆီး အဲလစ်ဇ်ဘတ် မန်းနင်း ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Trans Woman ဘဝကို ခံယူခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၇ မှာ ပြန်လွတ်လာပြီးတဲ့နောက် ၂၀၁၉ မှာတော့ WikiLeaks တည်ထောင်သူ Julian Assange (ဂျူလီယန်အက်ဆန်း) ရဲ့ အမှုမှာ သက်သေအစစ်ခံဖု ဆက်တိုက်ငြင်းဆန်လို့ နောက်ထပ် ထောင်ဒဏ် ၆၂ရက် ထပ်ကျပြန်ပါတယ်။ အမေရိကန်လို ဒီမိုကရေစီ နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို ကြုံးအော်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာတောင် နိုင်ငံရေးလောကထဲ ဝင်နွှယ်မိရင် ဘယ်လိုတွေ တွယ်ခံရမယ်ဆိုတာ မီးမောင်းထိုးပြနေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ရဲ့ အတွေ့အကြုံ ရပ်တည်ချက် ခံယူချက်တွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ရမယ့် Documentary တစ်ခုမို
Yesterday ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်လေး ကြည့်ကြရအောင်။ Musical ကားလေးပါပဲ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံး အဆိုတော်အဖွဲ့လို့ ပြောပြီဆို လူအတော်များများ ပြေးမြင်မိကြမှာ ဘီတယ်စ်ပါပဲ။ အအောင်မြင်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး သီချင်းတွေကို ရေးဖွဲ့ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ ဘိုဟီးမီးယန်းတို့ ရော့ကတ်မန်းတို့လို ဘိုင်အိုပစ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဘီတယ်စ်ကိုအခြေခံထားတဲ့ စိတ်ကူးယဉ် ဂီတ ရုပ်ရှင်လေးပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ အင်္ဂလန်ရဲ့ မြို့လေးတစ်မြို့မှာ အရမ်းကြိုးစားပေမယ့် မအောင်မြင်တဲ့ အဆိုတော်လေး တစ်ယောက် ရှိတယ်ပေါ့။ တစ်နေ့တော့ သူဟာ အဆိုတော်ဘဝကို လက်လျှော့လိုက်တော့မယ် အချိန်မှာ အဖြစ်ဆန်းတစ်ခု ကြုံလိုက်ရပါတော့တယ်။ အဲဒါကတော့ ကမ္ဘာပေါ်က လျပ်စစ်အားလုံး ၁၂ စက္ကန့် ပြတ်တောက်သွားပြီး အမှောင်ကျသွားတာပါပဲ။ အဲဒီ ၁၂ စက္ကန့်အပြီးမှာ ကမ္ဘာပေါ်က အရာအချို့ဟာ လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီး လူတွေက ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတောင် မသိတော့ပါဘူး။ ကိုကာကိုလာတို့ စီးကရက်တို့ကို လူတွေ မသိကြတော့ပါဘူး။ အဲဒီအထဲမှာ ဘီတယ်စ် အဖွဲ့လည်း ပါသွားတယ်ပေါ့။ အဲဒီ သီချင်းတွေနဲ့ သူတို့လေးယောက်ကို မှတ်မိနေသူက ဂျက် မာလစ် တစ်ယောက်ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ဒီတော့ သူဟာ ဘီတယ်စ်ရဲ့ သီချင်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ရေးသားသီဆိုသလို အသက်သွင်းဖို့ ကြိုးစားရင်း ကမ္ဘာကျော်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးကြုံလာတဲံအခါ.. ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးရင် ဘီတယ်စ်ကို အရင်က မသိခဲ့သူတွေတောင် ဘီတယ်စ် သီချင်းတွေကို ကြိုက်သွားကြမှာ သေချာပါတယ်။ ခံစားကြည့်လိုက်ပါ။
ဒါလေးကတော့ IMDb rating 7.2တောင်ရထားတဲ့ ဂျာမန်ဆက်ကျော်သက် Comedy/Musical Romaceကားလေးပါ။ ဆီရီဆိုတဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတစ်ယောက်က သူ့နှာခေါင်းကအရမ်းကြီးနေတာကြောင့် အမြဲစနောက်ခံနေရပြီး သူ့လိုရုပ်ဆိုးတဲ့သူကိုကြိုက်မယ့်သူမရှိဘူးလို့ပဲမှတ်ယူထားတာပါ။ ဒါပေမယ့်သူဟာအများထင်သလို အရူံးသမားတစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲ အမြဲစာတွေဖတ်ပြီး freestyle rap battleတွေကို မျက်နှာဖုံးစွပ်ပြီးသွားပြိုင်နေတဲ့ချာတိတ်တစ်ယောက်ပါ။ တစ်နေ့သူတို့ကျောင်းလေ့လာရေးခရီးထွက်တဲ့နေ့မှာ ကောင်မလေးအသစ်တစ်ယောက်ကျောင်းပြောင်းလာပါတယ်။ သူနဲ့အကြိုက်တွေတူတာကြောင့်ဘော်ဒါတွေဖြစ်သွားပေမယ့် စော်လေးကသူတို့အတန်းထဲက ရုပ်တော်တော်ချောပေမယ့်အရမ်းတုံးပြီး စကားမပြောရဲတဲ့ကောင်လေးကိုသွားကြိုက်ပါတယ်။ ဒီကားမှာတော့ဆီရီတစ်ယောက်သူ့ဘေးကစော်အလန်းလေးအဆင်ပြေအောင် ချောတဲ့ငတုံးကောင်လေးကိုအစအဆုံးလိုက်ကူညီနေရတာတွေ၊ ဂျာမန်rap battleတွေနဲ့ ဟာသလေးတွေကိုရှုစားရမှာပါ။ (ကြမ်းတမ်းသောစကားလုံးများပါဝင်ပါသည်။)
ဒါကတော့ IMDb rating 7.1နဲ့ Tomatoesမှာတော့လောလောဆယ်100%ရထားတဲ့ Finland Dramaကားလေးတစ်ကားပါ။Auroraဆိုတဲ့Finlandကောင်မလေးတစ်ယောက်ကအရက်တွေအလွန်အကျွံသောက် ပါတီတွေတက်ပြီးဘဝကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ဖြတ်သန်းနေသူတစ်ယောက်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံရှာမယ်စိတ်ကူးနဲ့ နောက်တစ်လ‌ဆိုနော်ဝေကိုသွားတော့မလို့လေယာဉ်လက်မှတ်ကိုအကြွေးဝယ်ထားလိုက်ပါတယ်။တစ်ညမှာတော့ Finlandသူတစ်‌ယောက်နဲ့လက်ထပ်ပြီးနိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ကလေးအဖေတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံစည်းမိပြီးသူ့ကိုလိုက်ကူညီပေးကာ လက်မှတ်ဖိုးရှာပါတော့တယ်။‌နော်ဝေသွားတော့မယ်သူတစ်ယောက်နဲ့Finlandနိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေသူနှစ်ဦးဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဒီDramaကားလေးမှာ ကြည့်ရှုလိုက်ပါအုံး။
IMDb rating 7.3 ထိရထားတဲ့ romaneကားကောင်းလေးပါ အရင် ယောကျာ်းနဲ့ပြသာနာတွေရှိတာကြောင့် ဘဝသစ်စမယ့်စိတ်ကူးနဲ့ တခြားမြို့ကိုပြောင်းလာခဲ့တဲ့ ဆရာမအသစ်လေးကျောင်းမှာ အမြဲပြသာနာရှာတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်နဲ့ချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာ…. ဆရာမကိုပဲကြိုက်နေတဲ့အဲဒီကျောင်းမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့တခြားဆရာတစ်ယောက်ကရောဘယ်လိုလိုက်နှောင့်ယှက်မလဲ… ကောင်လေးရဲ့မိဘတွေသိသွားတဲ့အချိန်မှာရော သူတို့နှစ်ယောက်ဘာတွေဆက်လုပ်မလဲ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ… အသက်ကွာခြားမှုတွေ,ကျောင်းသားနဲ့ဆရာမဆိုတဲ့ခေါင်းစဥ်တွေအောက်မှာ ထိန်းချုပ်ခံထားရတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကျမလဲဆိုတာ တကယ်ကိုromanceဆန်ဆန်ကြည့်ရမယ့် ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ
ကျန်းကျိဝေ ဆိုတာ သိပ်တော်တဲ့မီးသတ်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်….အတွေ့အကြုံလည်းများသလို တစ်ဒင်္ဂအတွင်းမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့် ငယ်သားတွေကလည်း လေးစားအထင်ကြီးကြတယ်..တစ်နေ့တော့ မီးလောင်မှုတစ်ခုမှာ သူတို့အဖွဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ကြတယ်…ကလေးတစ်ယောက်ကို ကျန်းကျိဝေခက်ခက်ခဲခဲကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်… ဒါပေမယ့် သူကလွဲလို့ မီးသတ်တစ်ဖွဲ့လုံးမမျှော်လင့်တဲ့ ဂစ်အိုးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် သေဆုံးကုန်ကြတယ်…..ကျန်းကျိဝေအတွက် စိတ်ဒဏ်ရာအရဆုံးဖြစ်သလို ဦးတည်ရာမဲ့ရပ်တည်နေသလိုခံစားရတယ်…စိတ်ပညာဆရာဝန်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရမူမမှန်သလိုဖြစ်နေတဲ့သူ့ကို မီးသတ်အဖွဲ့ကလည်း နှုတ်ထွက်စေချင်ကြတယ်…. တစ်နေ့တော့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံး ဆိပ်ကမ်းရေနံသိုလှောင်ကန်ကြီး ပယောဂတစ်ခုကြောင့် မီးလောင်မှှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်….အကြီးဆုံးရေနံသိုလှောင်ကန်ဆိုတော့ တကယ့်ကို ကပ်ဆိုးကြီးဆိုက်တာပါပဲ…အခက်အခဲဆုံးမီးလောင်မှုတွေမတားနိုင်ခဲ့ရင် အက်တမ်ဗုံး အလုံး ၂၀ အားနဲ့ ညီမျှတဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကဆိုကြတယ်….ဘယ်လောက်တောင်အားကြီးမလဲစဉ်းစားသာကြည့်တော့… ကျန်းကျိဝေတို့မီးသတ်အဖွဲ့တွေ နဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ ဘယ်လိုတားဆီးကြမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ကြပါဦး… ဒီကားက ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတာပါ… မီးသတ်နေတာကိုကြည့်ရုံနဲ့ ပျင်းစရာဇာတ်ကားကြီးလို့ထင်ရင်တော့မှားသွားလိမ့်မယ်…အစကနေအဆုံးထိ တကယ့်ကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ကြည့်ရတာပါ..ကိုယ်တိုင်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ထဲရောက်သွားသလိုခံစားရပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေတွေ လိုက်ကြည့်ရတာ ခင်ဗျားတို့ပါဇောချွေးပြန်လာလိမ့်မယ်… ရိုက်ချက်တွေကလည်း တကယ့်ကိုခမ်းနားသလို တခြားနိုင်ငံရဲ့ အထင်ကြီးလောက်စရာ နည်းစနစ်တွေကို အားကျစရာမြင်တွေရပါ့လိမ့်မယ်….
လွန်ခဲ့တဲ့လတွေက ရုံတင်သွားတဲ့ စွန့်စားမှု သည်းထိပ်ရင်ဖို ရုပ်ရှင်ပါပဲ။ ဗီလိန်ကတော့ငါးမန်းကြီးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ သူငယ်ချင်း ကောင်မလေး ၄ ယောက် ရေအောက်မှာ မြှပ်နေတဲ့ မြို့ဟောင်းကို သွားစူးစမ်းကြတယ်။ မထင်မှတ်တာတွေဖြစ်ပြီး ပိတ်မိသွားတယ်။ ငမန်းတွေ ပါးစပ်ကနေ လွတ်အောင် ပြေးကြရတာတွေပါပဲ။ ဒီလို survival အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်တွေကို နှစ်သက်တတ်သူတွေအတွက် ခံစားလို့ကောင်းမှာပါ။
ဝါနာဘရားသားကထုတ်တဲ့ ခေတ်သစ် ဆင်ဒရဲလား ကားသစ်တစ်ကားပါ။ အရင်ကားတေနွဲ့မတူပဲ ထူးထူးခြားခြား ခေတ်မီမီလေးတင်ဆက်ထားတဲ့ စင်ဒရဲလားဇာတ်လမ်းပုံစံ တေးဂီတနဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပါ မင်းသမီး နာမည်က စင်ဒရဲလားတော့မဟုတ်ပါဘူး ကက်လို့ခေါ်တဲ့ ကက်သရင်းပါ ထုံးစံအတိုင်း အဖဆေုံးပါးသွားလို့ မိထွေးနဲ့နေရသူပေါ့ မိထွေးမှာက သမီး နှစ်ယောက်ရှိပါသေးတယ် စင်ဒရဲလားဇာတ်လမ်းကိုကျောရိုးလောက်ပဲယူ ထားပြီး ခေတ်နဲ့ညီအောင်ရိုက်ကူးထားလို့ ရသတစ်မျိုးနဲ့ ကြည့်ရတာ အရမ်း ကောင်းတဲ့ ခေတ်သစ်စင်ဒရဲလား ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်တဲ့အကြောင်း သတင်းကောင်းလေးပါးလိုက်ပါရစေ
အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးနေလောက်မယ့် မင်းသားကြီး Ethan Hawkeရဲ့ Dramaကားသစ်တစ်ကားပါ။ အမေရိကားမှာ 1994ကပြဌာန်းလိုက်ပြီး အဲ့အချိန်ကပြည်နယ်တစ်ချို့မှာ လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ ဥပဒေတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့။ အဲ့တာကတော့ Three Strike Lawလို့ခေါ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်က အဲ့ဥပဒေကိုကျင့်သုံးတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုမှာ ပြစ်မှုနှစ်ကြိမ်ကျူးလွန်ပြီး တတိယမြောက်ပြစ်မှုကိုကျူးလွန်လိုက်မယ်ဆိုရင် အဲ့အမှုကဘယ်လောက်ပဲသေးငယ်ပါစေ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ကျခံရမှာပါ။ ဒီလိုနဲ့ဇာတ်ကားထဲကဇာတ်ကောင်က မူးယစ်ဆေးလေးတစ်အောင်စ လက်ဝယ်တွေ့ရှိပြီး ထောင်အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျသွားပါတယ်။ ထောင်ထဲဝင်သွားတုန်းက လူငယ်တစ်ယောက်ပေါ့ ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ သူသိပ်လိုက်မမှီနိုင်တော့ဘူး။ သူ့ကိုဖေးမပြီးတွယ်တာမယ့်သူလည်း တစ်ယောက်မှမရှိတော့ဘူး။ ဘဝမှာဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းမသိ၊ ဘာအတွက်ရှင်သန်နေမှန်းမသိတာကမှ တကယ်လမ်းပျောက်တာဆိုတာကို ခံစားမိစေတယ်။ The Shawshank Redemptionထဲက “Brooks was here”ဆိုတာလေးကိုတောင်သတိရသွားမိတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ညမှာ သူအလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုင်ရဲ့ နောက်ဖက် အမှိုက်ပုံးထဲမှာ စွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ တွယ်တာစရာမရှိတဲ့လူတစ်ယောက် စွန့်ပစ်ခံကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့…… ဇာတ်လမ်းကအရှိန်တက်နေရင်းနဲ့ ကြည့်ရှုသူတွေအတွက် မျှော်လင့်ထားသလိုထိချက်ပြင်းပြင်းနဲ့ ဇာတ်သိမ်းတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့လို့လားတော့မသိ ratingတွေ အရမ်းကြီးမကောင်းခဲ့ပေမယ့် တကယ်မြောပြီးခံစားနိုင်မယ့် ဒရမ်မာကားတစ်ကားပါ။
တစ်နေ့မှာတော့ သူ့အိပ်မက်တွေကို သူ့ရည်းစားဖြစ�